Shirka Afrika iyo Mareykanka - BBC Somali
Shirka Afrika iyo Mareykanka
Hasssan Gelle BBC Somali Service
Lahaanshaha sawirka afp getty
Image caption duurjoogta qaaradda afrika waxa ay la kulmayaan dhibaatooyin badan.
Kulankan ayaa la sugayay tan iyo intii Madaxweyne Obama uu balanqaaday markii saddex waddan ee Afrika ee Senegal,Tanzania iyo Koonfur Afrika uu booqashada ku tagay sanadkii hore.
Markuu la hadlayay dhalinyarada Afrika Madaxweyne Obama ayaa sheegay: "ammaanka, horumarka iyo cadaalada oo aan adduunka ka doonayno inaan la heli karin hadii aysan jirin Afrika oo horumarsan, awood leh oo isku filan".
Wuxuu sheegay inay tahay in la joogo waqtigii hogaamiyayaasha Afrika ay xal u heli lahaayeen dhibaatooyinka Afrika.
"Shaki kuma jiro hadii dib loo eego waqtigii gumaysiga, inaad heli kartid dhibaatooyin badan ee Afrika soo maray" isagoo sheegaya sida xuduudaha loo qaybiyay iyo qayraadka laga qaatay.
"Laakiin mar, waa inaan joojinaa inaan fiirino in xalka laga helayo meel kale, waana inaad xalka ka raadisaa gudaha.
Obama, madaxweynaha mareykanka.
Sida taariikhda ay u wayn tahay, waana u baahan tahay taariikhdaas, mar waa inaad fiirisaa mustaqbalka, oo aad tiraahdaa inkastoo markii hore aanan helin wixii aan doonayay, aan hubino inaan la samayn marmarsiiyo inaan horay loo socon".
Afrika iyo mareykanka
2000 Mareykanka kordhiyay deeqda afrika
2002 Afrika ka muuqatay suuqa mareykanka.
2006 Mareykanka deeqdii ka jaray Afrika
Cudurka dilaaga ah ee Ebola
14 Oktoobar 2014
K/Africa iyo Senegal oo mamnuucay safarada Liberia